Gudoomiyihii guddiga dib u eegista Dastuurka, Caasha Geelle oo is casishay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
6th May 2015 A warsame Af Soomaali 0
Mareeg.com: Gudoomiyihii Guddiga Madaxa Banaan ee Dib u eegsista Dastuurka Soomaaliya, Caasha Geelle Diiriye ayaa maanta ku dhawaaqday iney xilkaas iska casishay.
Caasha Geelle oo shir jaraa’id ku qabatay magaalada Gaalkacyo ee gobalka Mudug warbaahinta u aqrisay qoraal ay u gudbisay madaxweynaha Soomaaliya, Xasax Sheekh Maxamud, gudoomiyaha baarlamaanka, madaxda dowlad goboleedyada, iyo wasaarada dastuurka.
Waxey sheegtay Shaaca Geelle iney iyada la noqotay iney adagtahay in la helo dastuur Soomaaliyeed oo heshiis lagu wada yahay, taasina ka mid tahay sababaha ay isu casishay.
Akhri: Sababaha ay Caasha Geelle oo kasoo jeedda deegaanada Puntland isaga casishay gudoomiyaha guddiga madaxa banaan ee dib u eegista dastuurka Soomaaliya.
1- Waxaan shaqsiyan odorasay inaysan sahlaneyn suurtagalnimada dhameystirka Dastuur Hishiis lagu wada yahay xilliga kooban ee noo haray, iyadoo ay isa soo tarayaan xaalado siyaasadeed oo cakiran oo dalka ka jira, Ku kala Fikar duwanaashaha Fasiraada Qodobada dastuurka qaarkood, u heelanaan la,aanta Sareynta Dastuur Qaran oo dhameytiran oo aan ka horimaaneyhn dastuurada ay gaar u leeyihiin Dowladaha Xubnaha ka ah Dowlada federaalka somaliya.
2- Inkastoo aan caad ku rogneyn inay dalka ka jiraan duruufo adag oo aan kala dhib yareyn hadana waxaa cad in aan qorshe fiican horay loogu sameyn Dastuurka Qaran iyo dhameytirska ficliyan aan mudnaan fiican helin.
3- Xubnahayaga guddiga Madaxabanaan laftooda ayaa gaabisyada iyo ka faa,ideysashada la’aanta waqtiga qeyb ka ah maadama badankayagu aana dalka gudihiisa deegaan ku laheyn ,waxaan ku kala aragti duwanaanay suurta galnimada ku shaqeynta iyo ku milmida duruufaha adag ee dalka ka jira, dhexgalka bulshada ka faa’ideysashada iyo soo dhaweynta u heelanayaasha xirfadaha kala duwanleh iyo isticmaalka aqoonta iyo fursadaha laga helikaro qeybaha kala duwan ee bulshada Somaliyeed si loo dadajiyo geeddi-socodka dastuurka taas oo keentay in aan waqti u garda duubnaano fursado aan muuqan goorta ay imanayaan.
4- Guddiga madaxabanaan ee dib u eegista iyo hirgalinta Dastuurka ee sida magaca uu tilmaamayo aan kali ku aheyn ka go’aan qaadashada bilowga ilaa iyo dhameystirka dastuurka oo ay ku wehliyaan hay’ado kale oo dastuuriya oo aan qorsheynta iyo dhameytisrka shaqada hormuud ka ah, ha yeeshee marka gaabis yimaado cida kaliya oo aan farta lagu fiiqayo oo masuuliyadda fashilka qaadandoonta ay noqonayaan Guddiga Madaxa banaan oo loo igmaday inqy dib u eegaan dastuurka oo aan gudoomiyaha ka ahay.
5- Dhaqaalihii uu u baahnaa in lagu dhameystiro dastuurka oo af ahaan ay hadal hayntiisu badantahay ha yeeshee ficil ahaan sugaal tahay.
6- Waxaa jira daneeyayaal badan oo aan isla socon qorshayaal kala duwan ka leh dastuurka iyo dib u eegistiisa, kuwaas oo laftigoodu carqalad horleh ku noqonkara in lagu guuleysto dastuur dhameytiran oo hishiis lagu wada yahay.
Caasha Geelle ayaa muddo sanad ah heysay xilka ay maanta iska casishay, iyadoo Golaha Wasiirada Soomaaliya ansixiyeen magacaabisteed 29-kii May 2014.
Guddiga madaxa Banaan ee dib u eegista Dastuurka ayaa ka koobnaa xubnahan hoos ku xusan:-
5. Avv. Xasan Xusein Xaaji.
John Kerry oo la kulmay madaxweynaha Jabuuti ($68 Milyan dollar oo Jabuuti heleyso)